नेपाल बैंकका सीईओको तलब सुविधा ४६ लाख ९६ हजार ! – Halkhabar kura
२ माघ २०७७, शुक्रबार १२:१५
नेपाल बैंकका सीईओको तलब सुविधा ४६ लाख ९६ हजार !
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब भत्ताबापत ४६ लाख ९६ हजार ३०६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको साधारणसभामा पेश गरेको प्रतिवदनमा कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले ३० लाख १३ हजार ६४८ रुपैयाँ तलब र १६ लाख ८२ हजार ६५७ रुपैयाँ भत्ता बुझेको उल्लेख छ ।
बैंकको गत वर्ष कुल कर्मचारी खर्च २ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । यो बाहेक खर्च ६६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ ।
सभाले सर्वसाधारणको लागि ४ प्रतिशत नगद लाभांश र १२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुस – नेपालमै कतै नमनाइने ‘छोरा’ तिहार कर्णालीवासीले यसरी मनाए
भाइतिहार सकिएको दुई महिनापछि आज कर्णालीवासीले ‘छोरा’ तिहार पनि मनाएका छन् । नेपालमै कतै नमनाइने छोरा तिहार प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल द्वितीयाका दिन कर्णाली प्रदेशका जुम्ला डोल्पालगायतका जिल्लाका सर्वसाधारणले धुमधामका साथ मनाएका हुन् ।
Previous जागिर खुल्यो, सुब्बामा खुल्लाबाट ४११ र बढुवाबाट ४३२ जना पदपूर्ति हुने !
Next भारतको कारण नेपाली उद्योग धराशायी हुँदै !
अत्यन्तै राम्रा दुई कम्पनीले ३३ करोडको करोडको आईपीओ निष्कासन गर्दै
१९ आश्विन २०७८, मंगलवार ०८:४५